OUKITEL U18 Review, mihoatra ny clone fotsiny an'ny iPhone X | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | About us, Oukitel, hevitra
Niandry ny fitsapana an'ity telefaona ity izahay ary voarainay ihany tamin'ny farany. Ao amin'ny Androidsis afaka nanandrana ny OUKITEL U18 vaovao izahay nandritra ny andro vitsivitsy. Ny smartphone izay milaza fa ny efijery feno iPhone-aingam-panahy voalohany nahazo ny tsena. Ary ny tena marina dia toa tsara be ny efijeryo.
Sarimihetsika izay fitakiana lehibe amin'ny fifaninanana. Ny endriny dia mahatonga azy io ho toy ny "clone" an'ny iPhone X. malaza fa ny marina dia tsy hoe OUKITEL U18 fotsiny. Ho fanampin'ny efijery tsara izay aingam-panahy mazava tsara avy amin'ny tampon'ny isa. Manome bebe kokoa antsika ity telefaona ity. Ary izany rehetra izany dia amin'ny vidin'ny $ 154 fotsiny no azonao vidiana amin'ny fipihana eto.
1 Ny OUKITEL U18 dia tsy "clone" an'ny iPhone X fotsiny
3 Ny famolavolana ny OUKITEL U18 iray amin'ireo fitaovam-piadiana lehibe ananany
4 Ny efijery OUKITEL U18 dia nanintona ny antso avo nataony
5 Mpikirakira fanta-daza izay manome valiny tsara
5.1 Android 7.0 miaraka amin'ny isan-jaton'ny "fahadiovana"
6 Takelaka data OUKITEL U18
7 Ny sary an'ny OUKITEL U18 dia avy amin'ny tanan'i Sony
7.1 Fampiharana fakan-tsary feno tanteraka
8 Ampy ve ny bateria OUKITEL U18?
9 Mahazo fahatokisan-tena ny filaminana
9.1 Rafitra fanekena ny tarehy nohatsaraina
10 Fanaovam-beloma farany amin'ny jack 3.5 mm?
11 Ny tsara indrindra sy ny kely indrindra amin'ny OUKITEL U18
11.1 Ny tsara indrindra
11.2 Tsy dia tsara
12 Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Ny OUKITEL U18 dia tsy "clone" an'ny iPhone X fotsiny
Mazava fa inona koa Miavaha voalohany ity finday ity dia Ny fisehoany ara-batana. Ny fomba fampiasana ny tontonana eo aloha miaraka amin'ny fampisehoana. Ary ny lavaka ambony ho an'ny mpandahateny sy ny sensor dia azo fantarina tokoa. Ary izany no iorenan'ny OUKITEL amin'ny fampielezana doka tsara indrindra. Ho heverina ho klone an'ny Smartphone lehibe fahazoan-dàlana ampy hahamarika azy. Ary nahomby izy.
Toa toy ny Smartphone mahery vaika toy izany matetika fitaovam-piadiana mahery vaika. Ity dia zavatra iray izay efa noresahintsika tamin'ny hevitra hafa momba ny finday avo lenta "entanin'ny" aingam-panahy hafa. Raha ampitahaintsika amin'ny iPhone X ity OUKITEL U18 ity dia tsy hivoaka tsara. Fa na dia izany aza no mitranga, paikady mahomby ny fanararaotana ny iPhone hampahafantatra ny tenanao.
fa tsy hoe Smartphone fotsiny izay toa ny iPhone X. Ny OUKITEL U18 dia manana fakan-tsary indroa novokarin'i Sony 16 Mpx + 5 Mpx. ny Bateria 4.000 mAh mampanantena fahaleovan-tena mihoatra ny ampy izany. Ary manana fahatsiarovana izany RAM 4GB ary ny fahaizana 64 Gb fitehirizana anatiny.
Izy io dia miaraka amin'ny haingam-pandeha mpamaky ny rantsantanana. Izy io koa dia misy rafitra fanekena tarehy ho an'ny mamoha. Connector amin'ny famandrihana sy famindrana angona USB Type C. Ary miaraka amina lamosina miolaka sy efijery ho an'ny fijery tena mahasarika. Araka ny hitantsika, antony mihoatra ny ampy ny tsy hijanonana fotsiny amin'ny hoe mitovy amin'ny iPhone X.
Toy ny fanao amin'ny finday rehetra raisintsika dia tianay ny manao lisitra kely. Ary lazao aminao ny zavatra hitanay ao anatin'ny boaty amin'ity OUKITEL U18 ity. Ny famolavolana ny telefaona finday mihitsy, toy ny fanaon'ny orinasa hafa, dia tsy fomba nentim-paharazana. Raha tokony ho ilay boaty mahitsizoro mahazatra ananantsika tranga lehibe kokoa sy toradroa kokoa, ary koa manify.
Fa andao hiditra ao anatiny, izay no tena mahaliana antsika. Toy ny lojika, hitantsika eo alohan'izay ny fitaovana mihitsy fonosina tanteraka sy arovana amin'ny plastika miraikitra. Ary eo ambanin'ireo vaovao vitsivitsy ihany. Fahatongavana izay toa efa raisin'ireo mpanamboatra sy mpampiasa. Tsy misy headphone ary mbola tsy tianay izany.
Manana ny fotony isika. ny USB tariby, amin'ity tranga ity miaraka amin'ny famaranana Karazana C, ho an'ny famandrihana sy famindrana angona. Ny mpampitohy ny tambajotra elektrika, izay amin'ity tranga ity dia eoropeanina, zavatra izay mbola tsy raisin'ireo mpanamboatra rehetra. Ny "pin" hanokafana ny slot amin'ny karatra. Bokikely kely misy torolalana fototra sy ny mifanitsy aminy fampahalalana momba ny fiantohana.
Indray mandeha indray, manana ny adaptatera hampiasa ny headphone misy antsika mifandray amin'ny mpampita USB Type C. Indray, orinasa iray hafa izay manapa-kevitra ny hanao smartphone amin'ny alàlan'ny fanilihana ny mpampitohy mini jack ho an'ny headphones. Azontsika atao ny mampiasa ny headphones, fa tsy tsy misy an'ity tariby adaptatera kely ity. Mba hanandrana ny loko, fa amin'ny Androidsis dia mbola tianay ny mpampitohy Jack.
Ny filazana fa ny OUKITEL dia iray amin'ireo orinasa manonitra ny tsy fisian'ny headphone misy fanomezana kely. Zavatra fototra fa ankasitrahana tokoa. Tanana siliky mifanaraka tanteraka amin'ny telefaona vaovao. Ary hiaro azy amin'ny mety ho fipoahana sy ny gorodona. Sombiny iray izay tianay, ary soa ihany fa miha-mahazatra hatrany.
Ny famolavolana ny OUKITEL U18 iray amin'ireo fitaovam-piadiana lehibe ananany
Ny marina dia ny fisehoany ara-batana, Ankoatry ny fampatsiahivana antsika momba ny iPhone X, dia miavaka amin'ny anton-javatra hafa koa izy. Ny OUKITEL U18, ankoatry ny fananana efijery mahavariana dia misy ihany koa fakan-tsary indroa novokarin'i Sony izay horesahintsika amin'ny antsipiriany. Ao ambadik'izany isika dia mijery ny fakantsary eo afovoan'ny fitaovana, amin'ny tapany amboniny. Eo anilany indroa Tselatra LED. ary ambanin'ny mpamaky ny dian-tananareo dian-tanana.
Ho an'ny fanamboarana fitaovana tsy maintsy milaza isika fa ny haavony dia milatsaka be any aoriana. Amin'ity tranga ity dia hitantsika plastika. Fitaovana toa efa hadino. Na dia ny marina aza dia manintona ny maso ny fiafarany ary mahafinaritra ny mikasika. Ho fanampin'izany, eo amin'ny sehatry ny fakantsary dia misy karazana indentation kely izay manolotra fisehoana vaovao ary manavaka azy amin'ny ambiny, betsaka kokoa ny tsipika.
Ny "fihazonana" ireo fitaovana dia tena tsara. Ary amin'ny telefaona an-tànana dia tsy mahatsapa ho solafaka isika. Ny zavatra tsara iray hafa momba an'ity fitaovana ity dia ny dianay dia tsy handoto ny telefaona amin'ny fikasihana azy fotsiny. Tsy nitafy lamaody intsony ny plastika, saingy ratsy ve izany? Angamba ireo gadra amin'ny fironana lamaody, ny mpanamboatra hafa nisafidy vera na vy. Ny OUKITEL dia manohy miasa amin'ny plastika, ary ny vokany dia tsy ratsy mihintsy. Tiantsika.
Smartphone iray mihazona tsara amin'ny tanana iray izy io satria somary tery kokoa. Na dia tamin'ny voalohany aza dia manome ny fahatsapana ho mavesatra kokoa noho ny mahazatra. Noho ny bateria 4000 mAh. Ny endriny amin'ny ankapobeny dia misy fanamarihana tsara. Ny ampahany aloha dia manaitra ary ny lamosina dia tany am-boalohany ary vita tsara.
Ao aminy Ankavanana hitanay ny bokotra fanidy, ary bokotra elongated ho an'ny fanaraha-maso ny volume. Ny bokotra misy fitsangatsanganana tsara, mora tsindriana na dia eo aza ny tanany silicone. Efa nandramana finday avo lenta sasany izahay fa tamin'ny fonony dia nanamafy ny ati-dohany, tsy izany no izy.
El tsy misy bokotra ny lafiny ankavia. Ny slot azo esorina ho an'ny karatra SIM sy fahatsiarovana. Ao amin'ny tapany ambany dia ahitantsika ny lavaka ho an'ny mikrophone ary eo akaikiny ilay mpandahateny izay tsy stereo indray. Ary eo afovoany, ny OUKITEL U18 dia efa manana ilay efa natsangan'ny maro an'isa, USB Type-C. Mangarahara tanteraka ny tapany ambony. Aza mitady ny lavaka hidirana mini jack. OUKITEL koa dia manapa-kevitra ny tsy hanana azy, zavatra izay tsy tiantsika mihitsy amin'izao fotoana izao.
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra momba ny finday avo lenta an'ny efijery finday rehetra izahay, te-hanome hevitra momba ny zavatra iray izay anontanian'ny mpividy be dia be anay. Ny tapany ambony amin'ny efijery izay ahitantsika azy ny "notch" na poakaty amin'ny endrika "U" tsy manapaka sary, fampandrenesana na atiny multimedia mihitsy. Ny rindrambaiko dia nohatsaraina tanteraka ka ny fampandrenesana, ny sary na ny horonan-tsary dia mety ho ambany kely kokoa. Amin'ity fomba ity dia tsy misy tapaka na inona na inona ary ny zava-drehetra dia mijery tanteraka.
Ny efijery OUKITEL U18 dia nanintona ny antso avo nataony
Mazava fa ny efijery an'ity Smartphone ity no "hook" lehibe indrindra. Izy io dia manana endrika sy endrika endrika mitovy amin'ny iPhone X. Ary koa mirehareha amin'ny telefaona finday voalohany feno aingam-panahy avy amin'ny iPhone tsingerintaona faha-XNUMX ho hita eny an-tsena. Ary ny fampisehoana azy dia toa tena tsara amin'ny fitaovana voafintina sy vita tsara.
Izahay dia miatrika tabilao eo aloha be ampiasaina miaraka amin'ny efijery 2.5D vera boribory IPS LCD misy habe 5,85 santimetatra. Izany dia vahaolana 720 x 1440 px, miaraka amin'ny hakitroky ny 275 teboka isaky ny santimetatra. miaraka 21: 9 "fisehoana feno" endrika hankafizanao ny atiny multimedia ankafizinao amin'ny efijery feno.
El ny tontonana eo aloha dia atosika hatrany amin'ny max amin'ny faran'ny efatra. Ao amin'ny faritra ambany ihany no misy tsipika kely anoloana izay tsy zakan'ny efijery. Mifanohitra amin'izay hita, tsy natao ho an'ny bokotra capacitive an'ny Android ihany izy io. Ireo dia hita ao anatin'ny efijery ihany, saingy miafina rehefa te hahita zavatra amin'ny efijery feno isika.
Ny OUKITEL U18 ao aminy lateralary koa ao amin'ny ambony sy ambany endri-javatra zana-kazo tsy misy velively. Seho misy famolavolana na "Notch" vita ambony. Ny traikefan'ny mpampiasa dia tena tsara. Mora amin'ny maso izany, ary mampiseho kalitao sy famaritana loko tena mendrika. Amin'ny ankapobeny dia fahombiazana lehibe ny écran, zavatra iray izay mahatonga azy io ho Smartphone tena "mahafinaritra".
Ho an'ny fametrahana "fa", hampavitrika ny lambam-panazavana na ny hitsin-dàlana dia tsy maintsy manova fahazarana sasany ianao. Raha nanana fahazarana ianao swipe avy any ambony ka hatrany ambanyeo afovoan'ny fitaovana hijerena ny fampandrenesana na ny hitsin-dàlana. Miaraka amin'ny OUKITEL U18 tsy maintsy hataonao an-jorony izany satria eo afovoany, rehefa "manomboka" ny efijery dia midina tsy mankato io fihetsika io.
Mpikirakira fanta-daza izay manome valiny tsara
Araka ny voalazan'ny mpamokatra azy, ny OUKITEL U18 dia natao ho an'ny fampisehoana malama. Ary ny marina dia izay ny fandidiana azy dia tsy nisy kilema. Tsy misy fahatapahana, tsy misy "manantona" ary tsy misy fianjerana na famerenana tsy ampoizina. Afaka nanandrana ny OUKITEL U18 niaraka tamin'ny rindranasa mahazatra izahay ary niasa tanteraka ny zava-drehetra.
OUKITEL dia nanapa-kevitra ny hanana processeur voaporofo tsara. Voamarikao a asa lehibe ahazoana processeur sy fitaovana hampidirina am-pitoerana. Rehefa avy nanandrana azy isika dia tsy maintsy milaza fa ny vokany dia tsara indrindra. Azontsika atao ny manamafy fa ny OUKITEL U18 dia afaka manao izay rehetra angatahintsika avy amin'ny Smartphone.
Manana a MediaTek MT6750T, puce iray octa-core 1,5 GHz izay mamaly tsara amin'ity fitaovana ity. Misaotra mazava ho azy fa malala-tanana RAM memorysatria ny OUKITEL U18 dia misy fitaovana 4 GB. Ary manana fahatsiarovana anatiny ho an'ny Fitehirizana 64GB. Tarehimarika lehibe izay manome an'ity smartphone ity hery sy fahaizana mendrika ho an'ny telefaona tokana indrindra.
Raha ny GPU, ny OUKITEL U18 dia tonga miaraka amin'ny karatra sary malaza. ny ARM Mali T8620 MP2, satria afaka nanamarina izahay dia manome antoka fampisehoana mahafinaritra. Ary manolotra antoka sy valiny azo ekena sy ampy mba hahazoana tombony betsaka amin'ny efijery lehibe misy anao.
Android 7.0 miaraka amin'ny isan-jaton'ny "fahadiovana"
Raha mijery ilay rindrambaiko isika dia mifidy mazava tsara ny OUKITEL Android amin'ny kinova saika tsy mitongilana. Amin'ity tranga ity dia mbola manana ny kinova izahay 7 Nougat. Ary na dia tsy Android madio tanteraka aza. Tokony holazaintsika fa ny ny lamina fanamboarana dia tena tsy misy fotony. Ny fijery ara-batana an'ny sary fampiharana sasany dia tsy miova.
Raha fintinina, Amin'ny lafiny fampisehoana dia mila miresaka tsara momba ny OUKITEL U18 isika. Kandidà matanjaka iray hafa manana mari-pahaizana ampy hiadiana mifanatrika amin'ny Smartphone rehetra ao anatin'ny elanelam-potoana Android henjana be.
Takelaka data OUKITEL U18
efijery 5.85 santimetatra
Fakan-tsary Rear Dual 16 + 5 Mpx
Fakan-tsary aloha 13 MPx
lafiny 150.5 mm x 732 mm x 10 mm
lanja 213 gr
Vidio eto ny OUKITEL U18 ho fampiroboroboana.
Ny sary an'ny OUKITEL U18 dia avy amin'ny tanan'i Sony
OUKITEL, toy ny mpanamboatra maro any amin'ny kaontinanta Azia, misafidy mpanamboatra ivelany ho an'ny fakantsariny. Zavatra iray izay miteraka fanatsarana ny sehatry ny sary. Vao mainka aza rehefa tapaka ny fanapahan-kevitra hisafidy mpanamboatra manana ny lazany eto amin'ity faritra ity.
Ny OUKITEL U18 dia manana sensor Sony IMX135 Exmor RS. Sensor izay tsy miavaka amin'ny maha vaovao azy. Misy fitaovana maro izay nanomboka tamin'ny 2.014 dia nanapa-kevitra ny hanana azy io, toy ny Samsung Galaxy Note 3. Noho io antony io dia toa lany andro loatra amin'ny Smartphone iray mahita ny tara-pahazavana amin'ny 2.018. Ary zavatra tsikaritra amin'ny fotoana sasany izany.
Ny fakan-tsary dia nivoatra be tato ho ato, ary Ny sensor izay nosafidian'i OUKITEL ho an'ny U18 dia toa hatsaraina ho antsika, farafaharatsiny amin'ny resaka zava-baovao. Heverinay fa ny fisafidianana sensor tsy vaovao dia ho mora kokoa. Mampiharihary ny valin'ny sary nalaina.
Na dia azo ekena aza ny trondro, ny hafainganam-pandehan'ny shutter ary ny fifantohana amin'ny toe-java-maivana dia mamela zavatra maro irina. Amin'ity sary ity, miaraka amin'ny hazavana faran'izay ambany sy mampiasa jiro, dia hitantsika ny fomba mety indrindra amin'ny famaritana ny zavatra afovoany. Na dia mahatratra ambaratonga azo ekena aza.
Ny fakan-tsary any aoriana dia any amin'ny faritra afovoan'ny fitaovana no misy ny fakantsary aoriana ary apetraka ambony ambonin'ilay iray hafa ny lantirany. Miorina miankavanana ny jiro. Ary ireo zavatra roa ireo dia miavaka any aoriana noho ny indentation an'io any amin'ny tapany ambony.
Amin'ny taratasy, ny fakantsary dia manana isa "ampy" ahafahana manome valiny tsara. Manana fakantsary aoriana misy fakantsary roa miaraka amin'ny vahaolana 16 Mpx miampy 5 Mpx izahay. Izy io dia manana timer, detection face ary fitifirana mitohy. Ny fifantohana default dia mandeha ho azy, na dia azontsika atao aza ny manova azy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny efijery. Ary afaka misafidy ny handefa geotag ny sarinay izahay, na hanao izany amin'ny HDR na amin'ny fomba maoderina.
Tao amin'ity sary nalaina tany ivelany ity dia nahita olana vitsivitsy izahay. Angamba ny jiro voajanahary dia tsy ny tsara indrindra satria be rahona ny andro. Toa tsy ratsy ny fomba fijerin'ny maso mitanjaka. Fa raha vao manitatra ny sary isika dia mahita fa na dia amin'ireo zavatra manakaiky ny fakan-tsary aza dia miharihary noho ny tsy fisian'izany.
Fampiharana fakan-tsary feno tanteraka
Ny OUKITEL U18 dia manana fampiharana fakantsary tena niasa. Hatrany am-piandohana, amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny fakantsary ananantsika eo am-pelatanantsika fomba fitifirana samihafa. Manomboka amin'ny sary na sary an-tsary mahazatra, ka hatrany amin'ny karazana "portrait" misy blur background. Sary mainty sy fotsy na panoramic.
Izahay aza manana maody sary matihanina. Ny fampiasana azy dia afaka manatanteraka ISO, ny fifandanjana fotsy na ny fanaraha-maso ny fanidiana vavahady. Fahafahana maro ahazoana tombony betsaka amin'ny fakantsary. Ho fanampin'izany, manana ihany koa ny fahafahantsika mampiasa ny sivana amin'ny fotoana mitovy amin'ny fisamborana. Zavatra iarahan'ny orinasa maro mampihatra ny fakantsariny ary mahasarika ny mpampiasa izany.
Ny fifantohan'ny fakantsary OUKITEL U18 dia mety ho saro-pady loatra. Ary nahatratra an'ity fehin-kevitra ity izahay taorian'ny fakana sary samihafa amin'ny toerana iray sy nahazoana valiny tena hafa. Ary eo anelanelan'ny dimy na enina heverina ho mitovy sary hitantsika ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny fifantohana sy ny famaritana.
Amin'ity sary ity, na dia manao zoom kely nomerika aza isika dia manana famaritana tsara ny loko sy ny feo. Ary ny haavon'ny fifantohana dia miharihary fa tsara kokoa noho ilay teo aloha.
Ampy ve ny bateria OUKITEL U18?
Amin'ireo tsikera farany natao tamin'ireo smartphone farany hitsena ny tsena dia mahita fiovana vitsivitsy izahay. Zava-misy izany ny bateria dia mitombo amin'ny fahaizany. Ary izany tsikelikely ny fikasana dia ny fahazoana mizaka tena ihany koa. Ny tena izy dia tsy mitranga foana izany na dia misy bateria lehibe kokoa aza.
Hitanay fa fironana mahazatra indrindra fa mihamitombo hatrany ny efijery finday vaovao. Ireo efijery izay mihabe ny famahana sy ny hamafin'ny hazavany. Ary noho izany, rehefa mitombo ny efijery dia mitombo ny haavon'ny fihinanana bateria.
Izany no antony, manoloana ny fanjifana angovo avo lenta dia ilaina ny fampiharana ny fitaovana misy fihenan'ny batterie avo indrindra. Noho izany, indraindray vitsy dia hitantsika fa misy telefaona vaovao mahavita mahazo fizakantena. Tena sarotra ny mahazo Smartphone izay afaka manambatra efijery lehibe kokoa ary miaraka amin'izay dia maharitra ela kokoa ny bateria.
Ny fanatsarana sy ny symmetry tsara eo anelanelan'ny singa rehetra amin'ny telefaona dia lasa manandanja kokoa.. Avy amin'ny processeur mankany amin'ny hamafin'ny famirapiratan'ny efijery. Ny OUKITEL U18 dia manana bateria 4000 mAh. Ary na dia tsy bateria goavambe aza izy io, noho ny "fanitsiana" tsara ny singa ao aminy, dia ampy kokoa izany ka rehefa afaka andro iray dia afaka mahatratra ny farany
Asa tsara avy any OUKITEL, nahatratra terminal iray nahitana fahaleovan-tena tsara. Indrindra fa tsy mavesatra loatra, raha ampitahaintsika amin'ny finday avo lenta miaraka amin'ny fahaiza-manao mitovy. Ary koa, tsy misy ny hatevin'ny fitaovana mitombo tsy voafehy satria efa hitantsika ny zava-nitranga tamin'ny hafa.
Mahazo fahatokisan-tena ny filaminana
Ny OUKITEL U18 dia manana rafitra fiarovana isan-karazany. Mazava ho azy fa manana ny fototra izy io hidin-trano modely An'ny Android. Fa ny fiarovana anao dia ampiharina amin'ny mpamaky ny rantsantanana izay any aoriana. Mivaly haingana dia haingana amin'ny famohana izy io ary azo alamina amin'ny fampiasa hafa.
Ho fanampin'ireo rafitra voalaza etsy ambony hifehezana ny filaminana dia mirehareha ny OUKITEL fa manana ny U18 a rafi-pitiliana mandroso tarehy. Ary ny marina dia ny fanandramana ny sasany izay namela be ny faniriana. Azontsika lazaina fa miasa ny "face Id" an'ny OUKITEL U18. Afaka mamoha ny finday tokoa isika amin'ny alàlan'ny tarehy, ary ny antsika ihany.
Hanombohana azy, ny fahitana tarehy dia somary lava kokoa noho ny maka sary tsotra. Ary izany dia mampiseho amin'izany ny famakiana tarehy amin'ny famohana dia miharihary fa marina kokoa. Taorian'ny fitsapana maro natao dia azo atao ihany ny mamaha ny telefaona amin'ny tarehy izay voarakitra hanaovana izany. Afaka nanandrana rindrambaiko fitiliana endrika tena matotra izahay tamin'ny farany.
Rafitra fanekena ny tarehy nohatsaraina
Amin'ny lafiny ratsy, tsy maintsy milaza ihany koa isika fa nanana olana taorian'ny fampiatoana mamoha amin'ny fahitana tarehy. Raha ny fitsipika dia toa fahadisoana izahay tsy azo atambatra amin'ny mpamaky ny rantsantanana. Izany hoe raha misafidy ny mamoha amin'ny tarehy isika dia tsy hiasa ny mpamaky ny rantsantanana. Zavatra toa mazava fa tsy mifanaraka. Azontsika atao ny manambatra ny mpamaky ny rantsan-tànana amin'ny lamina hamaha, fa tsy amin'ny fahitana tarehy.
Ankoatra izany, rehefa tsy mandeha ny mpamaky ny rantsan-tànana dia esorina ny dian-tananay izay efa noraketinay. Ary raha te hampiasa azy io indray isika dia tsy maintsy hisoratra anarana indray. Mahamenatra ny tsy mahay miresaka tsara momba ny rafitra miasa mahagaga noho ny antony ivelany. Ary rehefa avy nanandrana azy izahay ary nahita fa mandeha io, dia nisafidy ilay mpamaky ny rantsan-tànana, haingana kokoa sy fomba fampiasana izahay, satria tsy mila manindry ny bokotra "an-trano" hampavitrika ny fakantsary.
Manantena aho fa ho voavaha tsy ho ela ity olan'ny tsy fitoviana kely ity miaraka amin'ny fanavaozana ny rafitra. Satria lafiny iray hisongadinana amin'ny Smartphone amin'ny tenany io tena feno. Manjary sakana tsy mahazo aina izany.
Fanaovam-beloma farany amin'ny jack 3.5 mm?
Araka ny efa nomarihintsika tamin'ny voalohany, ny OUKITEL U18, tsy manana ny output Jack mini mahazatra. Ary ilaintsika ny adaptatera izay miaraka amin'ilay boaty hampifandraisana ny headphones. Mbola mila mitondra fitaovana kely hafa indray isika. Na hampiasa vola amin'ny headset Bluetooth, izay toa toerana tian'izy ireo hitondra anay saika tery.
Fantatsika izany eny an-tsena misy kojakoja tsy misy tariby mihaino mozika amin'ny vidiny tena lafo. Fa misy ireo izay tsy te-hiasa amin'ny bateria avy amin'ny "gadget kely" hafa. Mbola toherinay ny fanomezana ny mpampitohy jack 3.5mm. Nefa toa eto no itarihan'ny mpanamboatra antsika tsy azo ihodivirana.
Mikasika ilay mpandahateny ivelany, satria iray ihany no ananany dia tokony holazaintsika fa tsy miavaka amin'ny heriny izy io. Izy io dia manana feo marina, misy famaritana tsara ary tsy misy fanodikodinana. Na dia somary latsaka kely aza ny haavony avo indrindra.
Hitanay fa nanapa-kevitra ny sasany amin'ireo "tampony" vaovao amin'ny ambaratonga avo hanokana filokana amin'ny fampitaovana ny fitaovan'izy ireo amin'ny mpandefa stereo mahery. Ka manantena foana izahay fa io fironana io dia horaisin'ireo izay milaza ho manandanja.
Ny tsara indrindra sy ny kely indrindra amin'ny OUKITEL U18
Azo antoka fa tsy maintsy manomboka amin'ny firesahana isika famolavolana an'ity Smartphone ity. Ankoatra ny fitoviana miharihary izay ananany amin'ny iPhone X. Ny asa vita koa eo an-damosina, ary koa amin'ireo zirony. Ho fanampin'ny famaranana miolakolaka na amin'ny efijery na amin'ny fonony aoriana. Mampifanatrika antsika izy ireo terminal iray izay miditra amin'ny fahitana ary tena vita tsara.
La fiainana bateriaRaha raisina ny fanjifana fanampiny namboarina tamin'ny alàlan'ny kalitaon'ny kaliberaly toy izany dia tsara indrindra izany. Na eo aza ny fananana batery izay tsy heverintsika ho lehibe loatra, dia tsara ny fahombiazany. Ary ny tsy fijerena ny charger mandritra ny iray andro sy sasany dia tsara.
Na dia tsy fahasamihafana lehibe aza izany, ny habeny an'ny OUKITEL U18 dia kely dia kely kokoa noho ny fitaovana hafa misy efijery na kely kely aza. Raha oharina amin'ny hafa dia somary tery kokoa ary lava kokoa aza. Plus na dia mieritreritra aza fa 5,85 santimetatra ny efijery.
Tsy dia tsara
El azo hatsaraina ny fifantohan'ny fakantsary. Toa tsy milamina izy io na mandeha foana ny fomba fanaony. Angamba azo vahana amin'ny fanavaozana ny rindrambaiko anao manokana. Izahay dia efa nanandrana ny fakantsary iray ihany sy ny sensor teo amin'ny terminal hafa ary tsara kokoa ny valiny.
Para ampandehano ny bara fampandrenesana na fanitsiana amin'ny fidirana mivantana dia tsy maintsy tarihintsika ny rantsan-tànana avy eo ambony ka hatrany ambany amin'ny iray amin'ireo zorony. Eo afovoany, noho ny fanamarihana, tsy manaiky ny fihetsika amin'ny alàlan'ny fikororohana ny rantsan-tànanao miakatra sy midina ny afovoan'ny fitaovana. Inona no mahazatra antsika. Ho lasa zatra fotsiny ilay izy.
Afaka nandinika izahay, taorian'ny fandefasana horonantsary mitohy lava be, izany somary mafana loatra ny telefaona. Tsy misy mampatahotra, fa afaka nahatsikaritra fiakaran'ny maripana kely izahay.
Na dia tsy zavatra manasongadina aza izany dia aseho ny OUKITEL U18 somary mavesatra noho ny fitaovana hafa. Araka ny efa nohazavainay, amin'ny ampahany betsaka noho ny androm-piainany malala-tanana.
ny ifantohan'ny fakantsary fakana sary
hafanana be loatra amin'ny fotoana fampiasana tsy tapaka
somary mavesatra kokoa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » OUKITEL U18 Famerenana
NAMANA FAMERENANA LEHIBE, ARY NY TSARA INDRINDRA REHETRA IZAO dia IZAO HENO HENO ANAO AMIN'IO DETAILY ITY SY NY FITIAVANA FITSIPIKA Mahafinaritra TSY MISY FITSARANAO, FANTATRAO? HANDEFANTANA HALALANA IZAO RAHA HANatsara HAHAZOAN-TENA AZO HAHAZOANA AZY TIAKO IZAY SORATOINAO MBA MIANDRAIKITRA, FIOMPIANA AVY AMIN'NY FITONDRANA TAMAZUNCHALE, SLP MEXICO
Valiny amin'i EDUARDO
Rafa Rodríguez Ballesteros dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao namaky anay, sy ny hevitrao. Ny marina dia terminal izay tiantsika betsaka amin'ny zavatra maro izany, na dia azo hatsaraina amin'ny hafa aza. Fa marina ihany koa fa sarotra kokoa ny mahita ny terminal tonga lafatra ho an'ny mpampiasa tsirairay. Fiarahabana lehibe ho an'i Mexico !!
Ny fahatongavan'i LG Q7 dia voamarina ho an'i Espana. Fantaro ny vidiny!